Home Wararka Ciidamada amniga ee DG Hirshabelle oo howlgal saaka ka wada Jowhar
Ciidamada amniga ee DG Hirshabelle oo howlgal saaka ka wada Jowhar
Magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda hanti-wadaag waxaa saaka ka socda howlgal ciidamada amniga ay sameenayaan halkaas. Tiro dad ah oo u badan dhalinyaro ayaa la sheegay in ciidamda amniga guryaha ay kala baxeen, iyagoo ku tuhmaya in ay ka dambeeyaan weerarka xalay ka dhacay Jowhar.
Howlgalkan ayaa daba socda weerar xalay koox hubeysan ay ku qaadeen guri ay ku sugnaayeen xildhibaano katirsan Hirshabelle, weerarkaas oo ay ku dhaawacmeen saddex xildhibaan. Xaaladda caafimaad ee xildhibaanada ku dhaawacmay weerarkaas ayaa lasoo warinayaa in ay soo hagaageyso. Magaalada Jowhar waxaa ku sugan xildhibaano katirsan Hirshabelle iyo musharixiin u taagan kuraasta Aqalka Sare ee Hirshabelle ku matalaya BFS 4-ta sano ee soo socota.